यसकारण आज पनि उत्तिकै विवादमा छन् बाबा रामदेव
सन् २०११ मा रामलिला मैदानमा भएको घटनालाई आजसम्म पनि कसैले भुल्न सकेको छैन । उक्त स्थानबाट बाबा रामदेव महिलाको वस्त्र सलवार कमिज र दुप्ट्टा लगाएर भागेका थिए । ठुलो संख्यामा आएका प्रहरीले उनलाई नियन्त्रणमा लिने प्रयास गरेका थिए ।
बाबा रामदेवका विवादहरुः
१. बाबा रामदेवको संस्थाहरुले आर्थिक हिनामिना गरेको र कर छली गरेको तहल्का म्यागजिनले एक रिपोर्ट प्रकाशित गरेको थियो । किसानहरुबाट जबर्जस्ती जमिन हडपेको तथा कृषिका लागि विधुत चोरी गरेको, बिक्रि गरेको सामानमा समेत कर छली गरेको आरोप लागेको रिपोर्ट तहल्का म्यागजिनले सार्वजनिक गरेको थियो ।
२. वरिष्ठ नेता बृन्दा कराटले दिव्या फार्मेसीलाई गम्भिर आरोप लगाएकी थिइन् । यो फार्मेसी पनि बाबा रामदेवको दिव्य योग मन्दिर ट्रष्टबाट चल्दै आइरहेको छ । उनले भनेकी थिइन्,‘ यो फार्मेसीमा औषधि बनाउन मानिस र जनावरको हड्डीको प्रयोग गरिन्छ ।’
३. योग गुरु बाबा रामदेवले दाबी गर्दै भनेका थिए,‘प्रणययाम दिनुहँ गर्नाले ६ देखि ९ महिनाभित्र क्यानसर रोकथाम गर्न सकिन्छ । स्तन क्यानसर, लिभर, प्रोटेस्ट, युटेरस, पिट्युटरी ग्ल्याण्ड, ब्रेन ट्युमर तथा लेइक्युइमेना जस्ता रोगहरु निको हुन्छ ।’
४. बाबा रामदेवले योगका कारण एड्स पनि रोकथाम गर्न सकिने बताएका थिए । उनले भनेका थिए,‘हामीले क्लिनिकल टेस्ट गर्दै योगाको सहायताले एड्स रोग निको पार्नेछौ । केही वर्षमा हामीले यो विधि सुरु गर्नेछौ ।’
उनले भनेका थिए,‘स्कुलहरुमा दिइने यौन शिक्षाको सट्टा योगाको शिक्षा दिइनुपर्छ । सरकारले निर्दोष बच्चाहरुको दिमागमा फोहोर गरेको छ । समाजको नैतिकता यौन शिक्षा दिएर सुदृढ हुँदैन । एड्स रोग फ्रि सेक्सको कुरा गरेर वा कण्डमको प्रयोग गरेर रोकथाम गर्न सकिदैन ।’
५. बाबा रामदेवले होमोसेक्सुवालिटी रोग योगा मार्फत हटाउन सकिने बताएका छन् । यो अन्य कन्जेनिटल डिफेक्ट झै रोकथाम गर्न सकिने बताएका थिए । यस्ता प्रकृतिका रोगहरु योगा, प्रणययाम र ध्यानबाट हटाउन सकिने समेत उनले बताएका थिए ।